Barattoota sabaan qooduun walitti buusuuf sochii taasifamu kamuu ni balaalefanna jedhan Barattoonni Yuunivarsiitii Amboo – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsBarattoota sabaan qooduun walitti buusuuf sochii taasifamu kamuu ni balaalefanna jedhan Barattoonni Yuunivarsiitii Amboo
Barattoota sabaan qooduun walitti buusuuf sochii taasifamu kamuu ni balaalefanna jedhan Barattoonni Yuunivarsiitii Amboo
OBN Sad 17, 2011 – Barattoota sabaan qooduun walitti buusuuf sochii taasifamu kamuu ni balaalefanna jedhan Barattoonni Yuunivarsiitii Amboo. Barattoonni Yuunivarsiitii Amboo hiriira guyyaa har’aa gaggeessaniin saboota obbolaa waliin taanee tokkummaadhaan nageenya Yuunivarsiitii ni eegsifanna jedhan.
Dhaabbilee barnoota olaanoo keessatti nagaa fi tasgabbiin akka hin jiraanne shira xaxamus hin fudhannu jedhan. Barattoonni Yuunivarsiitii Amboo dhaadannoolee Oromoo kan keenya, Amaaraan kan keenyaa, Tigrayi kan keenya, Gambeellaan kan keenya jedhuun kabajaa fi jaalala saboota obbolaaf qaban ibsaniiru.
Hiriira kana irratti barattoonni sabaa fi sablammii garaagaraa irraa walitti bahan hirmaataniiru jechuun Rippoortarri keenya Yeroon Toleeraa gabaaseera.
Sadaasaa 26/2018 Ganama kana Qeerroo barattootni Oromoo Yuunibarsiitii Amboofi Walisoo hiriira mormiirra jiru.
Yakka suukaneessa Barattoota Oromoo Yuunibarsiitii Goondorifi Asoosaa Irratti rawwachaa jiruufi Yakka Duguuginsa Sanyii Uummata Oromoo lixa Oromiyaa fi Naannoo BeenishangulGumuuz Godina Kamishii bakka #Yaasoo jedhamutti yakka duguuggaa sanyii uummata Oromoo irratti raawwatameef qaamni dhimmi ilaalu ittigaafatamummaa fudhachuu qaba, ajjeechaaf qe’eerraa buqqisuun haa dhaabbatu.
-Qeerroo dargaggootni Oromoo badii malee hidhamani hiraarfamaa jiran haa hiikkaman!!
-Barattootni Oromoo Yuunibarsiitii Oromiyaa keessa jirutti deebifamanii haa baratan!!
-Bu’aa siyaasaaf jechaa Sabaafi sablammii walitti buusuun dhiiga lammii keenya dhangalaasuun haadhaabbaatu!!
-Ajjeechaafi qe’eerra buqqisuun uummata keenyanarraa haa dhaabbatu!!
ከአሶሳ ዩኒቨርሲቲ ግጭት ጋር በተያያዘ ሶስት የፖሊስ አባላት በቁጥጥር ሥር ዋሉ